July 17, 2020 - Chothale
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी, सांसदहरुलाई खाली पानामा सही गराइयो !
July 17, 2020 chothale
काठमान्डौ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद चर्किँदै जाँदा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू निकट सांसदलाई तीन वटा फरक–फरक खाली पानामा हस्ताक्षर गराउनुभएको छ । अघिल्लो साता प्रचण्डले आफू निकट सांसदलाई बोलाएर तीन वटा खाली पानामा हस्ताक्षर गराउनुभएको हो । प्रचण्डले तीन वटा खाली पानामा हस्ताक्षर गर्न भनेपछि केही सांसदले खाली पानामा किन हस्ताक्षर गराउनु भएको भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रचण्डले एउटा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन, दोस्रो संसद अधिवेशन आह्वान गर्न र तेस्रो राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित विषय रहेको बताएको स्रोतले जनाएको छ। प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्न भन्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई…
समाचारकेपी ओली, नेकपा, प्रधानमन्त्रीLeaveacomment
July 17, 2020 July 17, 2020 chothale
काठमान्डौ । आफ्नो ४ वर्षकी बहिनीलाई मृ’त्युको मुखवाट बचाउने ६ वर्षीय बालकले विश्वभर प्रसंसा पाइरहेका छनु । अहिले यि बालकको विश्वभर चर्चा भइरहेको छ । आफ्नो ४ वर्षकी बहिनीलाई जव कुकुरले आ’क्र’मण गर्यो उनले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर कुकुरसंग लडेका हुन् । उनलको मुखभरी निकै धेरै चो’ट लागेको छ । ति बालकको मुखमा ९० वटा टाँका लगाइएको समाचार संस्थाले जनाएका छन् । शल्यकृयाका लागि चिकित्सकलाई २ घण्टाको समय लागेको थियो । विश्व बक्सिङ काउन्सिलले २ दिन अघि ट्वीट गर्दै एक ६ वर्षे बालकलाई ‘मानार्थ डब्लुवीसी च्याम्पियन’ ले सम्मान गर्ने जानकारी…
विविध, समाचारब्रिडजर वाल्करLeaveacomment
तपाईको वैवाहिक जिवनलाई खुसी र सार्थक बनाउने तरिका !
काठमान्डौँ – मानव जिबनका लागि विवाह समाजको अपरिहार्य नियम हो । पूर्वीय सभ्यतामा विवाह भनेको यस्तो चिज हो कि जो एकपटक गरिसकेपछि जीवनभर सँगै रहनुपर्छ । विवाहपश्चात् पुरुष र महिलाले एक–अर्काको स्वामित्व ग्रहण गर्दै जीवनभर सँगै रहनुपर्छ । वैवाहिक जीवनमा असमझदारी आएमा जीवन नै खल्लो हुने गर्छ । उसो भए विवाहपछिको जीवन कसरी खुसी र मजबुत बनाउने ? प्रस्तुत छ एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको एक सामग्री । जीवनभर साथका लागि विवाह गरिन्छ । त्यसैले विवाहपछिको जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि एक–अर्कालाई बढीभन्दा बढी समय दिन र विश्वास गर्नआवश्यक हुन्छ । पति–पत्नीले…
समाचारजिवन, वैवाहिकLeaveacomment